Ndị a bụ nsụgharị nke Samsung Galaxy A8 na-esote | Gam akporosis
Ndị a bụ nsụgharị nke Samsung Galaxy A8 na-esote
A ọhụrụ so na Samsung si Galaxy ezinụlọ leaked, nke a bụ na-esote Samsung A8 AX. N'ụbọchị taa, nsụgharị dị iche iche apụtawo ebe ị nwere ike ịhụ atụmatụ nke ngwaọrụ ọzọ site n'aka onye nrụpụta Korea. Agbanyela nsụgharị ọhụrụ a n'ihi eziokwu ahụ bụ na ekwentị enwetarala asambodo China ma ọ bụ mara dị ka TENAA.
Ọhụrụ Samsung phablet ga-abụ maka zuo si ọzọ 17 de Julio, ya mere ọkwa ọkwa gọọmentị kwesịrị ịda n'oge ụbọchị ole na ole sochirinụ. Samsung enyebeghị nkọwapụta ebe ngwaọrụ ga-abịa, n'agbanyeghị na enwere ihe ngosi na ngwaọrụ ahụ ga-ebu ụzọ pụta n'ahịa Eshia ma mesịa mee ya na ahịa ndị ọzọ, dị ka nke Europe.
Samsung A8 AX
Ọ bụrụ na anyị ejiri nlezianya lelee onyogho ndị ahụ enyere, anyị ga - ahụ ka Galaxy A8 nwere atụmatụ dị n’usoro nke ọma na akara ọhụụ nke ngwaọrụ Galaxy. Ọ nwere obere ihe ọ bụla n'ihu ngwaọrụ ahụ. Ejiri ígwè mee ihe ya na ebe isi igwe 3,5 mm dị na ala nke ekwentị ahụ. Mkpọchi na ike button enịm ke n'akụkụ aka nri nke phablet na ngwaọrụ nwere a 5,9mm ọkpụrụkpụ, nke ga-eme nke a smartphone bụ slimmest si emeputa Samsung.
Ka ọ dị ugbu a, anyị ahụla akụkụ anụ ahụ nke ngwaọrụ ahụ, mana n'ime anyị hụkwara ụfọdụ atụmatụ dị egwu. Samsung ọhụrụ Phablet ga-egwu egwuregwu a 5,7 anụ ọhịa ahụ nwere mkpebi dị elu (1920 x 1080 pixels). N'ime anyị na-ahụ etu ọ ga-esi jiri igwe 64-bit na isi asatọ rụpụta ihe nhazi ya nke Qualcomm, ọkachasị nke Snapdragon 615. Yana Qualcomm SoC, Samsung Galaxy A8 ga - enwe 2 GB nke RAM nchekwa na 16 GB nke nchekwa dị n'ime. N'etiti njirimara ndị ọzọ na-esighi mkpa, anyị hụrụ na batrị ọnụ ga-abụ nke 3050 mAh. Na ya foto ngalaba anyị na-ahụ otú ya isi igwefoto ga-adị 16 Megapixels na 1.9 lekwasịrị anya oghere na ikanam flash. Banyere igwefoto ya n'ihu, ọ ga - abụ 5 MP na ezigbo maka ịme onwe na oku vidiyo.
Samsung ga-ekpughere ngwaọrụ ahụ n'ime ụbọchị ole na ole sochirinụ, yabụ anyị kwesịrị ị atta ntị n'ihe ngosi ahụ ebe ọ bụ na, anyị ga-ahapụ obi abụọ gbasara ọnụahịa ya, nke ekwuru na ọ dị ihe dị ka euro 450. Enwere ike ịzụta ngwaọrụ na agba dị iche iche dịka ọcha, ọla edo na oji. Anyị ga-ahapụ obi abụọ banyere nnweta ya ma anyị ga-enwe nkọwapụta nke gọọmentị, yabụ anyị ga-echere ka ndị Korea mee ọkwa ọkwa nke ọnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Ndị a bụ nsụgharị nke Samsung Galaxy A8 na-esote
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na gam akporo M Onye Mmepụta Preview 2
Google na-adọta nkwụnye Ethernet iji Chromecast na-enweghị WiFi